Iilentile ezine-chorizo ​​​​eziqholiweyo kunye ne-paprika | Kitchen Recipes
Iilentile ezine-chorizo ​​​​eziqholiweyo kunye ne-paprika
UMaria vazquez | | Izitofu kunye neesobho zokupheka
Emva kweentsuku ezimbini zepati apho uninzi lwethu luye lwatya izitya esingazifaki ngokubanzi kwiimenyu zethu, kukho abo bafuna ukubuyela kwisiqhelo. Ukupheka, umzekelo izityu ezifana nesi sisuka iilentile ezine-chorizo ​​​​eziqholiweyo kunye ne-paprika, ilula yaye iyathuthuzela.
Isityu seLegume singundoqo kwimenyu yam yeveki. Sibadla, ngokuqhelekileyo, iintsuku ezimbini okanye ezintathu ngeveki, sihlala sizama ukujikeleza uhlobo lwe-legume. Ndihlala ndiqala ukuzilungiselela nge isiseko esihle semifuno Kwaye kukuba nangona oko kuye kwagqama kwisihloko i-chorizo ​​​​eqholiweyo yencasa enkulu enegalelo, isixa soku sincinci kakhulu.
Kwesi sityu into ebalulekileyo yimifuno: itswele, ipepile kunye nekarothi. Kwaye kubalulekile ukuba nesisa kwezi. Ukuba unayo i-leek ekhaya ungayongeza kwaye iya kuba yinto emangalisayo. Ndiyakukhuthaza ukuba uzame le ndlela yokuzenza; Ndiqinisekile ukuba uya kuzonwabela.
Ezi lenti ezineziqholo ze-chorizo ​​​​kunye ne-paprika zithuthuzela kakhulu, zilungele ubusika. Kwaye banesiseko esibalulekileyo semifuno njengoko uya kuba nexesha lokubona.
1 itswele enkulu ebomvu
Iikherothi ezi-2 ezinkulu
Ipepile eluhlaza eluhlaza yase-Itali
½ ipepile ebomvu egcadiweyo
Iisilayi ezi-6 zecrizo eqholiweyo
Itispuni yepaprika eshushu
240 g. iilentile
Sinqunqa itswele, iipepile kunye nekherothi exotshiweyo.
Sibeka iipuniponi ezimbini zeoli yeoli kwipuphu kunye siqhotsa imifuno Ngexesha lemizuzu engama-10.
Ke yongeza i-chorizo ​​​​eqoshiwe kwaye ushukumise de iqalise ukukhulula igrisi yayo.
Ke yongeza i-tomato echotshoziweyo, i-paprika zombini i-sweet and spicy, kunye nexesha. Hlanganisa kwaye upheke imizuzu embalwa.
Emva yongeza iilentile kwaye phezulu ngesisa kunye nomhluzi wenkukhu.
Sigubungela kwaye pheka imizuzu engama-18 phezu kobushushu obuphakathi. Emva koko, sityhila kwaye sipheke eminye imizuzu emihlanu phezu kobushushu obuphakathi okanye de zibe ziphelile.
Khonza iilentile nge-chorizo ​​​​enesiqholo kunye ne-paprika.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Izitofu kunye neesobho zokupheka » Iilentile ezine-chorizo ​​​​eziqholiweyo kunye ne-paprika
Ikhastadi yetshokolethi ekhanyayo
Ilayisi kunye ne-chanterelles